Agribo: बैठकहरु अधिक उत्पादक बनाउने | Martech Zone
Agribo: बैठकहरु लाई अधिक उत्पादक बनाउने
आइतबार, अक्टोबर 9, 2011 आइतबार, अक्टोबर 9, 2011 Douglas Karr
जब म एउटा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्दै थिएँ, मैले एक पटक परीक्षणको रूपमा बैठकहरूमा जान रोकिदिएँ। उत्पादन व्यवस्थापन टोलीसँग हप्ताहरू र कहिलेकाँही full पूर्ण घण्टा दिनको बैठकहरू थियो ... ग्राहकहरू, बिक्री, मार्केटिंग, विकास, र समर्थनहरूको साथ बैठक। यो पागल थियो। यो पागल थियो किनभने संगठनले भेट्न मन पराउँथ्यो तर वास्तवमा उनीहरूका कर्मचारीहरू समात्दैनथ्यो उत्तरदायी बैठक संग केहि गर्न को लागी।
त्यसो भए, २ हप्ता सम्म म एकल बैठकमा उपस्थित भएन। व्यक्ति जो टिप्पणी गर्छन् कि म त्यहाँ थिइनँ, केहि सहकर्मीहरूले ठट्टा गर्ने वा यसको बारेमा रिस उठ्ने थिए ... तर अन्तमा मेरो मालिकलाई त्यति मतलब थिएन। उसले मतलब गरेन किनकि मेरो उत्पादकत्व नाटकीय रूपमा वृद्धि भयो। समस्या यो थियो कि बैठकहरूले संगठनलाई पक्षाघात गरिरहेको थियो ... र मलाई पक्षाघातियो। किन? सरल शब्दमा भन्नुपर्दा - कहिले मानिस कहिले बैठक चलाउने वा कसरी फलदायी बैठक गर्ने भनेर सिकाइएको थिएन। दुर्भाग्यवस, यो उनीहरूले कलेजमा सिकाउने कुरा होइन।
I बैठकहरु को बारे मा लिखित एकदम थोरै ... तिनीहरू मेरो घरपालुवा जनावर हुन्। मैले प्रस्तुतिकरण पनि गरें बैठकहरू अमेरिकी उत्पादकत्वको मृत्युको लागि जिम्मेवार थिए। यो पनि म किन माया गर्छु भनेर अर्को कारण हो परिणाम केवल कार्य वातावरण। यदि बैठकहरू राम्रोसँग योजनाबद्ध र निर्धारित छैन भने, तिनीहरू सबैको समयको अविश्वसनीय बर्बाद हुन्छन्। यदि तपाईंसँग कम्पनीमा कोठामा people व्यक्ति छन् भने, सम्भावना यो छ कि तपाईंको सभाहरूको लागि एक घण्टा $5लागत लाग्दछ। यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने के तपाईं धेरै हुनुहुन्छ?
अब केहि टेक्नोलोजी हुन सक्छ जुन तपाईंको संगठनलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। सहमत एक सेवा (सास) अनुप्रयोगको रूपमा एक नि: शुल्क सफ्टवेयर हो जुन तपाईंलाई तपाईंको बैठकहरू सही निर्धारित, परिणाममुखी, सहयोगी र सबै भन्दा बढि उत्पादकको निश्चित गर्न सक्षम गर्दछ।
बैठक अघि: AgreeDo ले तपाईंलाई बैठक एजेन्डा सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। सबै सहभागीहरूलाई बैठक अघि एजेन्डामा सहयोग गरौं, ताकि सबैजना तयार छन्।
बैठकको दौरान: यो नियमित बैठक हो, वा एक तदर्थ छलफल, AgreeDo प्रयोग गरेर तपाइँको बैठक मिनेट लिनुहोस्। यसले तपाईंलाई कार्यहरू, निर्णयहरू, वा नोटहरू जस्तै सबै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू सजिलैसँग कब्जा गर्न मद्दत गर्दछ।
बैठक पछि: सबै सहभागीहरूलाई बैठक मिनेटहरू पठाउनुहोस् र परिणामहरूमा सहयोग गर्नुहोस्। AgreeDo ले तपाईंलाई कार्यहरू ट्र्याक गर्न र सजीलो अनुगमन बैठकहरूको समय तालिका बनाउन मद्दत गर्दछ।
को इन्टरफेस सहमत परिणाम उन्मुख छ:
र तपाईं आफ्नो बैठक कार्यहरू कुनै पनि समय इन्टरफेस भित्र जाँच गर्न सक्नुहुनेछ:
यदि तपाईंको कम्पनीले पीडित छ बैठक र केहि मद्दत चाहिन्छ, AgreeDo को उपयोग गर्न तपाइँका कर्मचारीहरूलाई धकेल्नाले तपाइँको संगठनलाई बदल्न सक्छ! AgreeDo का लागि दर्ता गर्नुहोस् सित्तैमा।
जहाँ व्यक्तिहरू उनीहरूको स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्
आईफोन प्रयोगकर्ताहरू बुझ्दै